Maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụsọ osimiri (ya bụ nzukọ, gaa nleta wdg) maka Rumotek ma ga-akpọtụrụ ndị ọrụ Rumotek, ndị ọrụ ahụ ga-ekwenye na emezuru ihe ndị a: mba na mpụga nke China. • ...
Igwe ọkụ Neodymium (nke a na-akpọkwa "NdFeB", "Neo" ma ọ bụ "NIB") bụ ihe ndị na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide nke neodymium, iron na boron alloys. Ha bụ akụkụ nke usoro nju ala ụwa dị ụkọ ma nwee ihe ndị magnetik kachasị elu nke ihe ndọta niile na-adịgide adịgide. N'ihi na ...
Ba ụba nke ihe onwunwe ụwa dị ụkọ
Ahịa ọnụahịa na-egosi na ọnụ ahịa akụrụngwa nke obere magnet Neummium dị ụkọ nwere nnukwu ịrị elu na izu ole na ole gara aga. Nke a na-eme ụfọdụ ndị ahịa na-echegbu onwe ha maka ọnụ ahịa ngwaahịa ha ma jụọ ihe ga-abụ ihe na-eme na ọnwa ndị na-eso ya na otu ha kwesịrị isi meghachi omume.
Kedu ihe kpatara eji akpọ Igwe Ọdụdụ Samarium Cobalt na Igwe Ọdụdọ Neodymium?
site ha na 20-04-22
E nwere ihe iri na asaa na-adịghị ahụkebe n'ụwa - iri na ise n'ime ha bụ lanthanides na abụọ n'ime ha bụ ọla mgbanwe, yttrium na scandium - nke a hụrụ na lanthanides ma ọ bụ nke yiri nke ahụ. Samarium (Sm) na Neodymium (Nd) bụ ihe abụọ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa na ngwa magnetik ...
Akụkọ ahụ Neodymium
Neodymium: Ọ bụ Carl Auer von Welsbach bụ onye Ọstrịa na-ahụ maka mmiri ọgwụ Austrian chọtara obere ntọala Neodymium na 1885, agbanyeghị na nchọta ya butere ụfọdụ esemokwu - enweghị ike ịchọta ọla ahụ n'ụzọ okike n'ụdị ọla ya, a ga-ekewapụ ya na didymium. Dị ka Royal Society of Chemistry si kwuo, ...
Kedu Tydị Mkpụrụ na-adọta na Igwe Ọdụdọ Neodymium?
Anyị niile maara na nju na-adọta ibe ha na osisi ndị na-abụghị ma na-agbapụ dị ka okporo osisi. Ma, olee ụdị ọla ha na-adọta? Neodymium magnets bụ ndị a maara dị ka ihe ndọta kachasị ike dị ma nwee ike ijide kachasị na ọla ndị a. A na-akpọ ha ferromagnetic meta ...
Igwe Ọdụdọ na Akụkọ: Ọganihu ndị na-adịbeghị anya na Nweta Mmezi Earthwa
Usoro ohuru maka ndi nchoputa ihe nke ndi sayensi na ulo oru nyocha nke Ames eweputala uzo iji ghaa ma ghagharia ihe ndi ozo nke neodymium nke achoputara dika ihe mejuputara. Emepụtara usoro a na US Department of Energy's Critical Materials Institute (CMI) nke na-elekwasị anya na teknụzụ ...